Ha Bixin Kharashaadka Boostada Tooska ah | Martech Zone
Ha Bixin Kharashaadka Farriinta Tooska ah
Talaado, Juun 25, 2013 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Inbadan oo idinka mid ah waad ogtahay inaan ka imid asalka boostada. In kasta oo waraaqaha tooska ah ay caddeeyeen inay ka qaalisan yihiin dib-u-soo-celinta dhimistooda marka la barbardhigo suuq-geynta internetka, weli waa kanaal wax ku ool ah. Waxaan ku aragnaa xoogaa soo noqosho wanaagsan oo ku saabsan warshadaha B2B - oo inta badan ka tagay boostada tooska ah. Fariimaha tooska ah ee macaamiisha la xiriira wali waa warshad aad u weyn, in kastoo.
Maanta, waxaan ku helay seddexdan qaybood oo isku mid ah sanduuqa boostadayda oo aan ugu diray isla cinwaanka saxda ah. Waa xirmo isku laaban oo qurux badan oo si fiican u naqshadeeyay dadkii ku sugnaa Victoria Secret. Nooca dhalinyarada, Pink, ayaa caan ku ah dumarka dhallinta yar, gabadhayduna waxay ku jirtaa liistadooda. Nasiib darrose Victoria Secret, in kasta oo ay tahay, haddana barnaamijkooda farriimaha tooska ah shaqo fiican kama qabanayaan yaraynta ololaha. Waxaan ku helnay 3 qaybood cinwaanka isku midka ah. Laba waxaa lagu qoray hingaadisyo kala duwan oo ah magaca koowaad ee gabadhayda midna aniga ayaa la ila hadlay… Wax fikrad ah kama haysto sababta.
Tani waa qalad qaali ah. Macluumaadka loo adeegsaday ololahan waxaa si fudud loogu dhex mari karaa softiweer xaqiijinaya in gabalka loo diro hal qof oo kaliya cinwaanka. Intaa waxaa sii dheer, xitaa waxaa lagu dari karaa xogta jinsiga si guud ahaanba iiga tirto dirista.
Haddii aad qorsheyneyso olole boosto toos ah, maskaxda ku hay in danta ugu wanaagsan ee hay'adaha qaarkood ay tahay inay kor u qaadaan tirada. Nasiib darrose, taasi waxay dib ugu noqoneysaa dib-u-celinta maal-gashiga iyo jawaabaha si dabiici ah. Muxuu noqon karaa olole weyn halkan waxaa laga soo sheegi karaa inuu yahay mid aan si fiican u soo bandhigin. Hubso in keydka macluumaadkaaga la koobiyey ka hor intaan la dirin oo la weydiin hay'addaada haddii ay diyaar u yihiin inay soo celiyaan wixii nuqullo ah ama qaybo la soo celiyey ah.
Tags: nuqulidboostada tooska ahpinksir sir ah
Eeg Mustaqbalka Dijital ah ee Tafaariiqda Caalamiga ah
Ayaa Fiirinaya Xayeysiiska Banner
Jun 25, 2013 saacadu markay ahayd 11:42 AM
Tani waxay qaas ahaan qaali ugu noqon kartaa tafaariiqleyda gaarka ah - waxay had iyo jeer ku diraan rasiidh alaab bilaash ah boostada. Halkii laga heli lahaa hal shay oo keliya, sida loogu talo galay, gabadhaada waxay ku soo ururin kartaa saddex shay oo bilaash ah khaladkooda khaladka. Way u fiicantahay iyada - waxay u xun tahay xariiqooda hoose. (Ciqaab ula kac ah laakiin u daayay majaajillo.)